Ampiio ireto singa 2 ireto isaky ny paositra, ary hipoaka amin'ny lazany ny bilaoginao | Martech Zone
Ampiio ireto singa 2 ireto isaky ny paositra, dia hipoaka amin'ny lazany ny bilaoginao
Alakamisy Janoary 2, 2014 Alakamisy Janoary 2, 2014 Douglas Karr
Hitanareo ve ny nataoko teo? Tabilao feno, cheesy, ivelan'ny-chart linkbait… Ary niasa. Eto ianao satria nanoratra lohateny fandefasana bilaogy tamin'ny fomba manokana aho. Ity ny paikady lehibe amin'ny tranokala toa an'i Upworthy sy Buzzfeed ary nahasarika mpamaky an-tapitrisany izy ireo tamin'ny fanitsiana ny lohatenin'izy ireo hanana singa fototra roa ihany… ny fahalianana sy ny fihetsem-po.
te hahafanta-javatra - amin'ny filazanao zavatra 2 dia manomboka manontany tena ny sainao ary be loatra ny fakampanahy hikitika.
fihetseham-po - Nampiasaiko tsara ilay teny laza amin'ny lohatenin'ny lahatsoratra. Iza no tsy maniry ny halaza ny bilaogin'izy ireo?
Ireo singa 2 ao amin'ny a lohateny dia mahomby amin'ny fomba mahatsikaiky saingy mila mampiasa azy ireo am-pitandremana fatratra ianao. Efa reraky ny tranonkala voalaza etsy ambony aho. Na dia manana atiny tsy hay tohaina aza izy ireo matetika dia tsy hitako izay lanjan'izy ireo ary very matetika minitra sarinà saka na mijery tantara mandrotsa-dranomaso aho. Fanamarihana: Tsy nifandray tamin'ireny tranonkala ireny aho satria natahotra ny tsy hahita ny sainao mandritra ny 45 minitra manaraka.
Midika ve izany fa tokony hialanao ilay tetika? Tsia… fa mieritreritra aho fa mila mitazona ny anaram-boninahitra tsy hitanjozotra any an-tampony ary hanome izay voalazanao taminao. Hitako fa maro amin'ireo tranonkala mampiasa an'ireto tetika ireto no tsy mahafeno ny fanantenana ny lohateny. Tono azy io vitsivitsy ary ho hitanao fa tetikady mahafinaritra izany.
Ka… andao lazaina hoe mpaka sary ianao ary manana lahatsoratra amin'ny toro-hevitra 8 momba ny fakana sary. Raha tokony ho ol 'mahazatra Hevitra 8 lahatsoratra bilaogy, azonao atao ny manoratra lahatsoratra toy ny Ataovy ireo dingana tsotra 8 alohan'ny hakanao ny sarinao manaraka ary ho gaga ianao amin'ny valiny. Te hahafanta-javatra (dingana inona?) Sy fihetsem-po (talanjona!).
Angamba tsy zavatra malaza toa ny fakana sary izany. Angamba mijery ny kodiaranao io! Hanoratra momba ny torohevitra ianao avy amin'ny matihanina Mechanics. Fa tsy ... Ny tsiambaratelo matihanina amin'ny fanitarana ny fiainana Tyro tsy misy sorona. Ny lahatsoratra dia mety momba ny fitazonana ny tsindry rivotra sy ny fihodinan'ny kodiaranao… fa azonao atao ny manova ny resaka amin'ny alàlan'ny fitadiavana ny fahalianana (tsiambaratelo?) Sy ny fihetsem-po (fiarovana!).
Aza raisina ny teniko. Omeo sary ilay andian-dahatsoratra manaraka amin'ny bilaogy. Raha azonao atao ny mampitombo ny tahan'ny click-through, ho hita bebe kokoa ny lahatsoratrao, zaraina bebe kokoa, ary hitarika orinasa fanampiny. Mandehana mipoaka!
Tags: te hahafanta-javatrafihetseham-pomanoratra lohateny postWriting
Stats sy tarehimarika amin'ny varotra finday 2013
Torolàlana ho an'ny fitetezana haino aman-jery sosialy
Jan 2, 2014 ao amin'ny 9: 59 AM
Doug, marina fa "niasa" ny linkbait amin'ny heviny hoe eto aho. Namaky ny lahatsoratrao aho. Saingy tsy namaky azy aho noho ny lohateny - namaky azy aho satria fantatro ny mpanoratra ary nihevitra aho fa mety ho vitanao ny manatanteraka ny fampanantenanao.
Mahazo fifamoivoizana bebe kokoa ianao amin'ity fomba ity, ary mahazo firotsahana avy amiko ianao amin'ny endrika fanehoan-kevitra, fa tena mahatsapa aho Kely kokoa mirotsaka amin'ny marikao amin'izao fotoana izao. Tsy te hizara ity lahatsoratra ity aho. Tsy tsapako fa nanome zavatra tsy fantatro taloha izany.
Mety ho izany anefa no tanjonao. Heveriko fa ny tranokala toa an'i Upworthy sy Buzzfeed dia manandrana mahazo olona an-jatony maro hitifitra satria tsy liana amin'ny fandraisana andraikitra ambony izy ireo. Mitady toromarika momba ny dokany sy ny fahafantarana ny marika izy ireo, fa tsy olona manaja ny fahaizany sy ny tatitra lalina.
Marina ve ny torohevitrao? Miankina amin'ny tanjon'ny mpivarotra izany. Raha tianao ny olona izay talanjona amin'ny "tsiambaratelo" amin'ny fanodinkodinana ny kodiaranao na "talanjona" amin'ny toro-hevitra hampiasa ny fitsipiky ny ampahatelony, dia mety ho mendrika io raikipohy io. Fa fantatro ho an'ity mpanjifa ity, miezaka TSY mikitika amin'ny linkbait aho. Tonga eto aho satria fantatro manokana ianao. Na iza na iza manana io lohateny io dia tsy noraharahaina.
Valiny mahafinaritra @robbyslaughter:disqus – ary ho hitanao fa manaiky tanteraka aho. Tsy tena mampiasa an'io paikady io aho ao amin'ny bilaogiko ary mamono ahy amin'ny bilaogy hafa. Te-hanoratra lohatenin'ny lahatsoratra tsara kokoa aho, na izany aza, nefa tsy mihoa-pefy amin'ny fanaratsiana olona. Na dia mety ho ambony kokoa aza ity paikady manokana ity - heveriko fa ny fampiasana ny fahalianana sy ny fientanam-po no tena zava-dehibe… tsy misy ny linkbait cheesy. Misaotra tamin'ny fanombohana resaka mahafinaritra!